Uyithandazela kanjani irosari yomfi Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ngexesha lomdlalo, umntu ufuna ukuba umphefumlo uphumle, yiyo loo nto siza kukufundisa indlela yokuthandaza irosari eyomfi kwaye ube nakho ukuzisa ukuthula kancinci kumphefumlo oshiyekileyo.
1 Ungayithandazela njani irosari yabafi kwaye ubanike uxolo lwanaphakade?
1.1 Yintoni irosari?
1.2 Amanyathelo okuthandaza iirosari kumfi
1.2.1 Ukuwela kunye "Ndiyavuma"
1.2.3 Ukuphuma kunye nemithandazo yokugqibela
Ungayithandazela njani irosari yabafi kwaye ubanike uxolo lwanaphakade?
Ukufa Ngumzuzu omdaka nongazinzanga kuye nabani na, akukho mntu uzilungiselele wona, kuba kukumka emhlabeni womoya uye kwihlabathi lomoya. Xa sisifa, sibeka bucala umzimba wethu wenyama kwaye umphefumlo wethu uye ezulwini okanye, usilele oko, unokuthi ume ngxi, kuba ufuna ukuphumla ngoxolo.
Inkolo yamaKatolika ithi xa umntu eswelekile, kufuneka kwenziwe umngcwabo ofanelekileyo, ukuze umzimba wakhe uphumle kwaye umphefumlo wakhe uphume kule ndawo ngendlela ezolileyo. Emingcwabeni, izalamane ziyahlanganisana zizise utata ukuze amnike ingcwaba elifanelekileyo; enika intsikelelo yovelwano lomphefumlo wakhe.
Amalungu osapho aqokelelene emngcwabeni, umzuzu apho kunikwa imbeko kulowo ungasekhoyo, ii-anecdotes kunye namabali abaliswayo apha, ukongeza, kulapho abantu banokuvalelisa khona kwaye bazilele ukumka komntu. Ayaziwa ngokuqinisekileyo ukuba kukho ntoni xa usifa, kodwa uThixo ebesoloko ethetha ngeParadesi kwaye injongo kukuba umntu esimthandayo angangena.
Ukuze umphefumlo uphumle, njengoko kuchaziwe kwisithethe samaKatolika, kufuneka unikwe iNovenario. I-novena iquka ukwenza imithandazo ethile yokuba umoya uphumle, yinkqubo ekufuneka ihlale iintsuku ezili-9, ke, kuya kufuneka uqaphele kwaye uqiniseke ngokufuna ukuqhubeka nayo.
Kwi-novenary, isixhobo esingundoqo sinokusetyenziswa; irosari. Le ncwadi yenkolo yamaKatolika isetyenziselwa ukubona ubomi bukaYesu ngamehlo kaMariya kwaye sithandazela yonke into eyenzekileyo ebomini beNkosi, ke ngoko, kukho imithandazo ukuze umphefumlo uphumle.
Ekuqaleni kwecawe, ngonyaka ka-800 AD, incwadi yaphuhliswa ngabantu abacinga ngecawa, ukwenzela ukuseka uxhulumaniso oluthile phakathi kwabantu kunye neNtombikazi, kunye naphakathi kukaYesu nabantu, ngenxa yokuba Ukudibanisa abantu kunye nebali leNkosi, kuzo zonke iimfihlakalo kunye nemithandazo ethile ebeka amaxesha akhethekileyo kunye nokuzinikezela ngokomoya.
Irosari njengombhalo imfutshane, nangona kunjalo, inesakhiwo esipheleleyo ekufuneka sixhase inxenye yomphefumlo nomzimba, konke ukuze kubekho unxibelelwano oluzinzileyo nolulungileyo kwinkqubo, engabonwayo njengomsebenzi odinisayo kufuneka yenziwe kwaye ngoku. Iimfihlakalo zahlulwe zayi-3 kwaye zona, ngokwahlukeneyo, zahlulwe zayi-5, kubalwa iindinyana ukusuka ebuntwaneni ukuya kwimizuzu yakhe yokugqibela, ukufikelela kuvuko lwakhe.
Incwadi inesakhiwo esincinci, kuqala umnqamlezo, apho sizisola khona ngezenzo zethu kude kube ngulo mzuzu kwaye sinike amandla ngakumbi ngomthandazo othi "Ndiyavuma". Ke emva koko kwenziwa ukucengceleza ubuqaqawuli, ukuze ukwazi ukuqala ngeemfihlakalo, kuxhomekeke kumhla.
Yonke imfihlelo exeliweyo, kufuneka icamngce kakuhle kwaye ihlalutye. Ekupheleni kwemfihlakalo, thandaza uBawo wethu kunye no-10 uThixo akusindise, iphela ngoGloria, ngolu hlobo de kube yimfihlakalo yokugqibela.
Xa iimfihlakalo zigqityiwe, kufuneka kwenziwe imithandazo ethile kwaye, ukunika amandla kuyo yonke into, umntu anokuyisebenzisa esebenzisa ukuthoba. Emva kokusebenzisa i-ejaculation, imithandazo ehambelana nayo iyenziwa, malunga noku unokufunda kwinqaku elilandelayo esililungiselele ngakumbi la matyala "Ukuphelisa amadlozi kwabafileyo".
Amanyathelo okuthandaza iirosari kumfi
Uluhlu lwezenzo lubalulekile, kuba into nganye inenkqubo kunye nendlela yokusebenza, ngenxa yoko, awungekhe utsiba inyathelo okanye wenze into kuqala emva koko wenze enye into. Kuyimfuneko ukuthandaza ngokholo nangocwangco ukuze imithandazo iviwe.
Ukuwela kunye "Ndiyavuma"
Isinyathelo sokuqala sokuqala i-rosari ukwenza umnqamlezo, ukwenza uphawu lomnqamlezo omncinci; ibunzi, umlomo nesifuba. Emva koko kwenziwa uphawu olukhulu, zombini entloko, esifubeni, egxalabeni nasegxalabeni lasekunene, ngaloo ndlela unika indlela yokuhlanjululwa kunye nokulungela ukuthandaza.
Umthandazo wokuqala oza kusetyenziswa ngulowo wokuvuma izono, oquka ukufuna ukuxolelwa phambi koThixo, uxolise ngokwenza isono nokwenza izono, ngaloo ndlela uzuze uxolo ngayo yonke loo nto. Emva kokwenza la manyathelo angaphambili, uvala inxenye yakho yokuqala yenkqubo nge "Gloria", edibanisa uthando lwakho nodumo kuThixo.
Xa sele uwucocile umphefumlo wakho, lixesha lokuba ungene ngokupheleleyo kulo mbandela, iimfihlakalo ziqala ukufundwa, ukuze ukwazi ukwazi inxenye yento uYesu ahamba kuyo, ngalo mzuzu wobomi bakhe apho imfihlakalo ifunyenwe , kuba, iimfihlakalo ezintathu eziyalela kwirosari zii-atapas zabantwana, abafikisayo nabadala.
Ungayenza le nkqubo wedwa okanye uhambe nayo, ke ngoko, yonke into ixhomekeke kwintuthuzelo yakho kunye namandla kunye nomntu oza kuthandaza, kodwa ungayenza wedwa ngaphandle kwengxaki, into ebalulekileyo kukuba uyayenza le nkqubo. Emva kwemfihlelo nganye kufuneka uqalise uBawo Wethu, oza kukhatshwa ngu-10 "UThixo akusindise", ube ngumnikelo weNtombikazi enguMariya, ukuze uThixo wokugqibela akusindise uthandaze "Uzuko".
Ukuphuma kunye nemithandazo yokugqibela
Izichaso zizivakalisi ezifutshane, ke ngoko kuyacetyiswa ukuba usebenzise imithandazo engekho mide kakhulu kwaye uwave onke amandla, ayinyanzelekanga, kodwa ungayisebenzisa ukukhapha inkqubo yokuthetha nomfi kunye nokucela uxolelo noThixo. Okokugqibela, uyayigqibezela inkqubo ngemithandazo yokugqibela, ethi leyo ithiwe kwirosari, ukuze uwele kwakhona.